Shirka Garoowe oo qarka u saaran inuu laba arrin dartood u fashilmo. – Shabakadda Somalibile Media
Shirka Garoowe oo qarka u saaran inuu laba arrin dartood u fashilmo.
Magaalada Garowe ee Caasimada Puntland waxaa habeenkii Lixaad ku sugan Madaxda maamul goboleedyadda iyo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay ka hadlayaan Xaaladda Soomaaliya.
Shantii Bishaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddoomiyey Shirka Wadatashiga Heer Qaran oo ka furmay magaalada Garoowe ee Caasimadda dowlad goboleedka Puntland.
Shirkan waxaa ka qeyb galaya Ra’iisul Wasaraaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre, Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, Galmudug Axmed Ducaale Geelle, Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Koonfur-Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cabdirixmaan Cumar Cismaan Yariisoow.
Muddo shan maalmood waxaa shirka looga hadlaayay Cabashada maamulka Galmudug ee ku aadan dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay faragalin ku heyso oo taageero ay siiso siyaasiyiin kasoo horjeedda Madaxweyne Xaaf.
Madaxweynayeyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa soo jeediyay in ka hor inta aan lagu guda galin Arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka in la xaliyo tabashadda Maamulka Galmudug.
Kulan Saacaddo badan qaatay oo dhexmaray Farmaajo iyo Xaaf ayaa kusoo dhamaaday Fashil ka dib markii labadda dhinac aysan gaarin wax go’aan ah, waxaana Madaxweyne Farmaajo uu sheegay in dib loo dhigo arinta Galmudug oo qodobadda kale loo gudbo, waxaana arintaasi si weyn uga soo horjeestay maamul goboleedyadda qaarkood sidda ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada Garoowe.
Maanta wax shir ah ma uusan dhicin, waxaana socda kulamo gaar ah gaar ah oo u dhaxeeya Madaxda Galmudug, Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee ku sugan Garoowe.
Shirka ayaa waxaa ku furmay Khilaaf labaad oo ka yimid Shaqaaqaddii shalay ka dhacday Garoonka Diyaaraddaha Magaalada Kismaayo ee Musharax Seeraar.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uu abaabulay shaqaaqaddii shalay ka dhacday Garoonka Kismaayo ee Askarta lagu dhaawacay.
Wafuudda ka qeyb galeysa Shirka ayaa sidoo kale inoo sheegeen Madaxda Dowlad goboleedyadda qaarkood ayaa ku hanjabay in ay ku laaban doonaan degaanadii ay ka yimaadeen hadii Mas’uuliyiinta dowladda aysan muujin furfurnaan iyo in si dhab ah looga wada hadlo arimmaha taagan oo Khilaafka Galmudug uu ugu horreeyo.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shirka marti galiyay ayaa Saacaddihii ugu dambeeyay xoojiyay dadaalkiisa ku aadan in uusan fashilmin Shirka, islamarkaana wax uun laga soo saaro.